TOP goobaha ugu fiican ee loogu talagalay Adobe Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Adobe Photoshop Waa barnaamij qiraya dhammaan noocyada kala duwan ee kheyraadka horay loo sii diyaariyey waxaana laga yaabaa inuu noqdo mid ka mid ah qodobadiisa ugu xoogan maxaa yeelay dhammaan qalabyadan awgeed waxaan ku badbaadin karnaa waqti aad u fara badan markaan bilaabi karno la shaqeynta. Taasina waa noocyada kala duwan ee aan sidan ugu adeegsan karno arjigu inuu yahay mid aad u weyn: Burush, qaabab, sawirro vector, shaandhooyin, ficillo ...
Markaan helno fursado badan oo kala duwan, waxaan u jeesan karnaa ilo dibadeed anagoo raadineyno cunsur kasta oo aan u baahanahay. Shabakadda waxaa ku yaal tiro aad u tiro badan oo bogag internet ah oo ku takhasusay bixinta noocyada noocan ah hab (inta badan kiisaska) gebi ahaanba bilaash ah. Maanta waxaan sameyn doonaa xulasho yar (oo waxaan idhi wax yar maxaa yeelay waxaan ka tagnay bangiyada waaweyn dhuumaha) waxaanan kugu martiqaadeynaa inaad naga caawiso sidii aan u dhameystiri lahayn liiska oo ay ku jiraan waxa ilahaagu yihiin. Waa maxay bogagga kheyraadka aad isticmaasho (ka sokow Creativos Online) si aad uga shaqeyso dalabka ugu caansan Adobe? Noo soo sheeg faallooyinka!
Yaan waqti fiican ku lumin isku dayga inuu iska jaro sawir dijitaal ah? Immisa ayaa ku guuldareystay inay helaan natiijadii ay raadinayeen? Tani waxay nagu dhacday dhammaanteen mar uun. Si loo xaliyo carqaladahan taxanaha ah waxaan miciinsan karnaa bangiyada sida PSD SPIyo, waxay siisaa tiro aad u badan oo ilo ah Photoshop. Waxaa ka mid ah saldhig weyn oo turjubaanno ah, sawirro la soo jaray iyo waxa ugu fiican oo dhan ayaa ah inaan heli karno qalabkan oo aan soo dejisan karno xitaa diiwaangelin la'aan.
Blogs sidoo kale maanta waa ilo lagu kalsoonaan karo oo lagu helo ilo muuqaal ah (Creativos Online waa tusaale wanaagsan, haa?), gaar ahaan maadaama ay badanaa jiraan naqshadeeyayaal garaaf ah oo mas'uulka ka ah oo ay si fiican uga yaqaanaan qof kasta nooca ilaha ee waxtar leh. Xaaladdan oo kale waxaan kuu soo bandhigeynaa blog-ka Argentine (aad loo yaqaan) taas, marka lagu daro bixinta naqshado diyaar ah oo u adeega hage loogu talagalay horumarinta shaqooyinka cusub, waxay leeyihiin tiro aad u tiro badan, astaamo iyo vectors. Raadintaada waxaad ka geli kartaa waxyaabaha aad raadineyso, waana hubaa inaad heli doonto. Diego Mattei Shaki la'aan waa mid ka mid ah ilahaas aan u baahan nahay inaan ku darno quudkeena si aaysan u seegin wax ama labo.
In kasta oo bangigan uusan ku takhasusayn Adobe Photoshop, hubaal gudaheeda ayaan ka heli karnaa inta badan ilaha laga yaabo inay ka badan yihiin ama ka yar yahiin lama huraanka. Xaaladdan oo kale, waxaan ka helnay qof la doonayo oo awood u leh inuu si wax ku ool ah u shaandheeyo raadintayada iyo u dhexeynta qaybaha kala duwan. Mid ka mid ah awoodaha ugu waa weyn ee ay leedahay Freepik ayaa ah in faylalka ay gebi ahaanba xor yihiin (in kasta oo ay tahay in loo isticmaalo iyadoo la xusaayo qoraaga) umana baahna nooc diiwaangelin ah. Halkan waxaad ka heli kartaa burush, vektor, sawirro ...
Markaan helno dhammaan waxyaabaha suurtogalka ah, tallaabada xigta waa inaan shaqada u degno. Laakiin markan waxaan helaynaa booggii ugu horreeyay, la'aanta Raxmadda. Taasi waxay ku dartay tababar la’aan, xaqiiqda kaliya ee xitaa isku dayaya in la abuuro wax hufan ayaa naga dhigi doonta mid adag. Tan waxaan u isticmaali doonaa qaar ka mid ah casharrada badan ee ku yaal bogga aan bixino. Ha ka baqin inaad aragto natiijada habraac kasta, waxay leeyihiin shaqadooda laakiin xoogaa xirfad iyo dulqaad leh waad ku hor marin kartaa. Liiska sare ayaa sidoo kale leh qayb si gaar ah loogu talagalay ilaha ay ka mid yihiin tusaalooyinka iyo noocyada iyo waxyaabo kale.
Waa halbeegga naqshadeeye kasta oo sawir leh. Boggan waxaa ka mid ah dhammaan ilaha lagama maarmaanka ah ee aan u baahan doonno inta lagu jiro jaan-qaadkeenna: Laga soo bilaabo casharrada illaa wax bixinta, burush ama ficillo ... Qalabka guud ee waxtarka leh oo sidoo kale la cusbooneysiiyay laguna cusbooneysiiyay xawaare wareer leh laakiin ugu fiican dhammaantood, dhammaantood waa bilaash . Waxa ku dhacaya bangigan weyn ayaa ah in isticmaalayaasha laftooda ay mas'uul ka yihiin abuurista iyo tusmeynta ilaha bogga. Boggan waa mid shaqeynaya maxaa yeelay marka lagu daro bixinta tusmada iyo ilaha waxbarida ah ee aan ugu adeegsan karno shaqadeena, oo leh tiro badan oo isticmaaleyaal ah, waxay sidoo kale naga caawin kartaa inaan xiriir la sameyno. Waxay ku filnaan doontaa in la abuuro galkayaga oo aan u wareejino shabakadda bulshada. Taasi waa ... Yaan aqoon Farshaxanka Deviant?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » TOP websaydhyada ugu fiican ee loogu talagalay Adobe Photoshop
Websaydhka ugu horreeya ee PSDSPY wuxuu ii sheegayaa in domainka la iibinayo
Ku jawaab Mushu